ယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်ဟာ ရူခင်းသာတစ်နေရာမှာ လှပတဲ့မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်မိတယ်။ အဲဒီနောက် သူဟာ မိန်းမပျိုနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မိန်းမပျိုက နောက်လှည့်ပြီး သူ့ကို အရဲစွန့်မေးလိုက်တယ်။
"ရှင် ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မနောက် တကောက်ကောက် လိုက်နေရတာလဲ?"
"မင်း အရမ်းချော၊ အရမ်းလှလို့ပါ။ မင်းလောက်ချောတဲ့လူ ငါမတွေ့ဖူးသေးဘူး။ ငါ့ချစ်သူလုပ်ပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်"
"ရှင်အခု နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်.. ကျွန်မညီမကို တွေ့လိုက်မယ်။ သူက ကျွန်မထက်တောင် ပိုလှတယ်"
မိန်းမပျိုစကားကြားတာနဲ့ သူချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်မိန်းမလှမှ သူမတွေ့မိလိုက်ပါဘူး။
"မင်း ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကိုလိမ်တာလဲ?"
"ရှင်ကသာ ကျွန်မကို လိမ်နေတာပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်မကို ရှင်တကယ်နှစ်သက်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်လို့ ခေါင်းပြန်လှည့်ကြည့်ရသလဲ?"
မိန်းမပျိုက ပြောပြောဆိုဆို နေရာက လှည့်ထွက်သွားတော့တယ်။
လူတွေဟာ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာကို တန်ဖိုးမထားတတ်ကြဘူး။ ဒါဟာ တခြားလူအတွက်တင်မကာ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း ရှုံးဆုံးမှုတစ်ရပ်၊ နစ်နာမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ... ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေကို ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်တာဟာ အချိန်ကုန် လူပမ်းတဲ့အပြင် ဘာအကျိုးမှလည်း မဖြစ်ထွန်းစေပါဘူး။
ပြင်သစ်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Louis Pasteurဟာ ပဲရစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ တည်းခိုဖို့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုရောက်တော့ ဝန်ထမ်းက ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် ဝတ်စားမထား၊ ပစ္စည်းများများစားစား မပါတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ဒါဟာ သာမန်ဧည့်သည်တစ်ဦးပဲဆိုပြီး သူ့ကို အလင်းရောင်မရတဲ့ အခန်းသေးတစ်ခန်းမှာ နေရာချထားပေးလိုက်တယ်။
နောက်မှ သူဟာ နာမည်ကြီး ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဝန်ထမ်းသိလိုက်တော့ သူ့ကိုအခန်းပြောင်းပေးဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းက "ဧည့်သည်ရဲ့ သဘောထားကြီးခြင်းနဲ့ရာထူးဂုဏ်ကို သူနဲ့အတူပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ အချိုးကျတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်လို့ အခုလိုအခန်းမျိုးပေးမိတာပါ။ ကျွန်တော်မှားသွားတယ်.. ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်" လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကို Louis Pasteurကရယ်ပြီး "မဟုတ်သေးဘူး.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ကြွားဝါခြင်းက သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်နည်းခြင်းနဲ့ အချိုးကျတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
တကယ့် ခွန်အားရှိ၊ ပညာရှိသူတွေဟာ ကြွားဝါခြင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ရာထူးဂုဏ်ကို မမြင့်တင်တတ်ဘူး။
Posted by minthantzaww at 04:34